Imeya ibonge izakhamizi ngokubekezela | Eyethu News
Imeya ibonge izakhamizi ngokubekezela
“Ithi bazokwenza konke okusemandleni ukugwema ukuhamba kukagesi.”
IMeya yoMasipala uMsunduzi uKhansela Themba Njilo obonge izakhamizi ngokubekezela.
Imeya kamasipala woMsunduzi ukhansela Themba Njilo ubonge izakhamizi ezibekezele isimo esingemnandi sokuhamba kukagesi ngempelasonto yePhasika.
Izakhamizi ezisenkabeni yedolobha, kanye nezindawo ezinjengo-Eastwood, Glenwood, Cindarella, nasePrestbury zithwale kanzima ngesikhathi kuhamba ugesi okudalwe yinkinga kwesinye sesiteshi eziphaka ugesi.
Kusize ukufika kochwepheshe abaphuma eGoli nokuyibona abakwazile ukulungisa lenkinga edale izindleko eziningi kwabaningi. “Isikhathi sePhasika esokuphumula uhlale nabangani kanye nomndeni, ukuhamba kukagesi akuyona into emnandi ngoba kuyathikameza empilweni,” kusho imeya enkulumweni ne-Edendale Eyethu.
Ukuhamba kukagesi kulethe uvalo kwabaningi lokuthi kungenzeka kube nenkinga yokuhlinzeka ngogesi njengoba kuqala ubusika.
Ngokusho kweMeya kuzokwenziwa konke okusemandleni ukugwema ukuhamba kukagesi njengoba kubekwe izigidigidi zamarandi ukulingisa ingqalasizinda nokuzoqinisekisa ukuthi kungabikho ukuphazamiseka ngokuhlinzekwa kukagesi.
Indoda engenakhaya, 60, iminzile